Homeसमाचार‘म कलाकार भए’ भनेर बुवाको गु’नासो थियो’ मृ,त्यु हुने दिन म सँग नबोली जानु भयो- राजेश हमाल (भिडियो सहित)
April 1, 2021 admin समाचार 2983
कुनैबेला नेपाली भाषामा वर्षभ’री एउटा फिल्म बन्न पनि मुस्किल थियो । फिल्मी क्षेत्रमा करिअर बनाएर कहाँ पुगिन्छ भन्ने टुङ्गो थिएन । यो क्षेत्रमा भविष्य खोज्नु नै मु’र्खता मानिन्थ्यो । त्यही अन्यौलका बीच फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेका राजेश हमालको फिल्म यात्राले ३३ वर्ष पूरा गरेको छ ।
यात्रा यति लामो होला भन्ने उनले कल्पना’सम्म पनि गरेका थिएनन् । तीन दश’कमा राजेश हमाल नेपालका सर्वाधिक रुचाइएका अभिनेतामात्र बनेनन् ‘हिरो’को पर्याय नै बने । आज राजेशले खनेको बाटोमा यात्रा गर्ने अनगिन्ती यात्रीहरु थपिएका छन् । उनी आफ्नो विगत’लाई अद्भूत यात्राको संज्ञा दिन्छन् ।
राजेशले फिल्म गर्दा व्यव’सायिक मसला फिल्म बन्थे । उनले त्यस्तै फिल्म गरे । पछि’ल्लो समय यता चरित्रचित्रणका विषय उठ्न थालेका छन् । अभिनेता हमाल त्यो बेला फिल्म गर्दा पनि च’रित्रमा मिहेनत गर्ने गरेको बताउँछन् । मजदूरको चरित्र गर्न मजदूरसँगै १ हप्ता संगत गर्नुपर्ने, समय बिताउनुपर्ने बिचार त्य’तिबेला थालनी भइसकेको थिएन । तर उनले ‘सेन्स अफ ए’म्पथी’ प्रयोग गरे । इताजा खबरबाट
बाँकी भिडियो हेरौ:
आज मिति २०७७ साल चौत १९ गते बिहिबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
रचना रिमालले नै गाईन्- ‘फोटो फिरिममा २’ गीत (भिडियो हे’र्नुहोस)
ज्योतिष शास्त्र अनुसार आइतबारका दिन यस्ता काम गर्नाले मिल्नेछ सफलता
November 15, 2020 admin समाचार 6525
शास्त्रले मानिसको जी’वन पद्धति’का विषयमा सवै जान’कारी दिएको हुन्छ । कुन दिन के काम गर्ने ? के गर्दा जी’वनमा सफलता मिल्छ ? के कस्ता काम गर्नुहुँदैन ? ल’गायतका यावत विषयमा धर्मशास्त्रमा सवि’स्तार व’र्णन गरिएको पाइन्छ
युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीलाई पितृ शोक, कोरोना सङ्क्रमणका कारण बुवाको निधन
May 25, 2021 admin समाचार 2649
चर्चित युवा ज्योतिषी एवं कलाकार हरिहर अधि’कारीलाई पितृ शोक परेको छ। हरिहरका पिता रामबहादुर अधिकारीको सोमबार नि’धन भएको हो। अधिकारीमा २० दि’नअघि कोरोना सङ्क्र’मण देखिएको थियो । स्वास्थ्यमा समस्या दे’खिएसँगै एक हप्ताअघि नेशनल अस्पताल कलङ्कीमा
November 27, 2020 admin समाचार 7206
सामा’न्यतया जो केहिलाई पनि चिसोको स’मयमा हाडजोर्नीको समस्या हुने गर्दछ । बढ्दो उमेरका मानि’सहरुलाई क्याल्सि’यमको कमीका कारण जोर्नी दुख्नु सामा’न्य कुरा हो । । मानि’सहरु यस्ता दुखाई कम गर्नका लागि विभिन्न औष’धिको प्रयोग तथा पेनकि’लरको